Fumax - mpanome tolotra avo lenta. Izahay haverich traikefa amin'ny famokarana Aluminium PCB miaraka amina hafanana avo lenta.
Ny haben'ny vokatra PCB Aluminium azon'ny Fumax atolotra：
* Afaka manome PCB LED lava be (fitaovana base aluminium) hatramin'ny 1500mm lava.
* Fanandramana manan-karena amin'ny fanodinana lavaka fandavahana manokana toy ny Lakan'ny Countersink & Counterbore (Spotface).
* Fitaovana miorina amin'ny aliminioma na varahina ny hateviny dia hatramin'ny 5.0mm
* Tsy misy MOQ ho an'ny prototypes sy ny filan'ny fitsarana. Manohana injeniera maro ny fitsipika mifehy ny lamina.
* Ny hatevin'ny aliminioma: （1.5mm）;
* Ny hatevin'ny diélectrique FR4 mic 100 micron）;
* Ny hatevin'ny varahina: （35 micron）;
* Ny hateviny ankapobeny （1.635mm）;
* Fandeferana matevina （+/- 10%）;
* Sakan'ny varahina （tokana）;
* Fitondra-tena maharitra （2.0W / mK)）;
* Naoty mora mirehitra （94V0） ；
Tombony ho an'ny PCB Aluminium:
* Sariaka amin'ny tontolo iainana - Ny alikaola dia tsy misy poizina ary azo haverina. Ny famokarana amina alimo dia manampy amin'ny fitehirizana angovo ihany koa noho ny fanamorana ny fivoriany. Ho an'ireo mpamatsy birao vita pirinty, ny fampiasana an'ity vy ity dia manampy amin'ny fitazonana ny fahasalaman'ny planetantsika.
* Fanaparitahana ny hafanana - Ny hafanana be dia mety miteraka fahasimbana lehibe amin'ny fitaovana elektronika, noho izany fahendrena ny fampiasana fitaovana afaka manampy amin'ny fanaparitahana ny hafanana. Ny aliminioma dia afaka mamindra ny hafanana lavitra amin'ireo singa tena ilaina, ka mampihena ny vokany manimba mety hitranga amin'ny solaitrabe.
* Faharetana avo lenta - Ny aliminioma dia manome tanjaka sy faharetana amin'ny vokatra iray izay tsy azon'ny fotony vita amin'ny seramika na fiberglass. Aluminium dia fitaovana mafy orina izay afaka mampihena ny fahatapahana tsy nahy mandritra ny famokarana, fikirakirana ary fampiasana isan'andro.
* Maivana - Noho ny faharetany tsy mampino, metaly mavesatra maivana ny alimo. Manampy tanjaka sy faharetana ny aliminioma nefa tsy manampy lanjany fanampiny.
Aluminium PCB dia karazana takelaka fanaovana pirinty vita pirinty (MCPCB), izay ampiasaina amin'ny indostrian'ny jiro LED.
* Fitaovana fanamafisam-peo: fampidirana, fanamafisam-peo, fanamafisam-peo mifandanja, fanamafisam-peo, fanamafisam-peo, fanamafisam-pahefana.
* Famatsiana herinaratra: mpandrindra fanovana, DC / AC mpanova, mpandrindra SW, sns.
* Fitaovana elektronika fifandraisana: fanamafisam-peo matetika, fitaovana fanivanana, fizaran-tany mpampita
* Fitaovana mandeha ho azy ao amin'ny birao: Fiara mitondra fiara sns
* Fiara mandeha: regulator électronique, ignition, contrôleur power supply, sns.
* Solosaina: tabilao CPU, kapila kapila, fitaovana fampitaovana herinaratra sns.
* Modules herinaratra: inverter, fampitaovana henjana, tetezana mpanitsy.
* Jiro sy jiro: Amin'ny fampiroboroboana ny jiro mitsitsy angovo, jiro LED mitsitsy angovo isan-karazany no eken'ny tsena tsara, ary ny pcb aliminioma ampiasaina amin'ny jiro LED dia manomboka fampiharana lehibe ihany koa.